Sida loo ilaaliyo ciddiyaha Protect nails
Ciddida waxay ka mid tahay waxyaalaha Ilaahay CAZZA WA JALLA nagu qurxiyay waxay ka difaacaysaa maqaarka inuu dilaaco, waayo waxaa lagu gunuday meelaha jirka ku dhammaado, sidoo kale haddii ciddadu jiri lahayn qofka faraha wax kuma qaban kareen, waayo waxay iska ahaan lahaayeen hilib tabar daran.
Maxaa ciddida ridi kara?
ciddidu siyaabo badan ayay ku dhici kartaa farta ama suulka ayaa bukan kara markaas ayay siibmi kartaa, sidoo kale marka ruuxa uu soconayo waxaa laga yaabaa inuu si xoog meel ugu dirsado markaas ay ciiddadu jabto waxaa u badan sheekadaas dadka kubadda cayaara.
Ciddada marka ay dhaco maxaa la rabaa in la sameeyo?
marka ay kaa dhacdo ciddida waxaa lagaaga baahan yahay inaad adeegsato daawooyin marka hore ka ilaalinaya dhaawaca inuu dhibaato weyn keeno, teeda kale waxaad ka ilaalinaysaa wixii jug ah oo nabarkaas dhimin kara oo taas waxay keenaysaa inuu si dhaqsi u raysan waayo nabarka.